Ny olona izay an'Andriamanitra noho ny harena sarobidy — Trip LEE - OFISIALY SITE
Ny olona izay an'Andriamanitra noho ny harena sarobidy
Ny olona izay manana an'Andriamanitra noho ny harena manana ny zava-drehetra ao amin'ny One. Maro ny olon-tsotra dia mety holavina harena azy, na raha misy mahazo manana azy, ny fifaliana ny azy ka dia ho mora tezitra fa tsy ho ilaina ny fahasambarana. Na raha tsy maintsy mahita azy izy, iray rehefa afaka indray, dia zara raha hahatsapa ny fahatsapana ny very, fa manana ny Loharanon'ny zava-drehetra ananany ao amin'ny fahafaham-po rehetra ho iray, fahafinaretana rehetra, rehetra mahafinaritra. Na inona na inona mety ho very izy raha ny marina dia tsy very na inona na inona, fa izao no izany rehetra izany ao amin'ny One, ary manana izany fotsiny, ara-dalàna ary mandrakizay.
A.W. Tozer, Ny fikatsahana an'Andriamanitra
kelleyR • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:04 aho • navalin'i